Adeegga ICO KYC | Shuruudaha & Nidaamka - Liistada ICO ee khadka tooska ah
ICO soo socota
★ Horumarinta ★
Liiska Sarriflayaasha ugu sarreeya
Soo gudbi Airdrop
Adeegyada Suuqgeynta ICO
Adeegyada Liiska Sarrifka Crypto
Hantidhawrka Qandaraaska Smart
Ethereum ku saleysan ICO
Binance Smart Chain ku salaysan ICOs
Baro Macaamilkaaga (KYC)
Beddelka Lacagta Crypto
Kordhinta dhawaanta ee ICOs waxay soo bandhigtay dhibaatooyin fara badan oo murugsan sidoo kale Ogow Macaamiilkaaga (KYC) wuxuu isu beddelay mid ka mid ah dhibaatooyinkaas sida caadiga ah la dayaco laakiin wuxuu noqon karaa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee ICO-gaaga. Dhisida awoodaan iyo nidaamka gudaha waa qasab.
In aan si dhab ah loo qaadan waxa ay khatar gelinaysaa adeeggaaga marxaladda hore. KYC waa hab lagama maarmaan ah oo lagu xaqiijiyo aqoonsiga dadka iyo kooxaha. Liistada ICO ee khadka tooska ah waxay caawisaa dadka iyadoo loo marayo KYC tillaabooyin fudud. Nidaamkeena KYC ayaa diyaar u ah dadka aduunka oo dhan.
Mararka qaarkood waxaan ka helnaa codsiyo kooxaha doonaya inay ka faa'iidaystaan ​​bulshadeena. Sababtaas awgeed, waxaan dhab ahaan gaarnay go'aan ah inaan ku darno sifo cusub oo laga yaabo inay gacan ka geysato aqoonsiga kooxaha khiyaanooyinka iyo khiyaanooyinka. Hada laga bilaabo kooxaha ICO waxay u baahan yihiin inay maraan hanaan gaaban oo KYC ah. Nidaamkani waa ikhtiyaari. Si kastaba ha noqotee, waxay ku qasbanaan doontaa ICO-yada u muuqda kuwa su'aalaha naga qaba, ICO-yada naloo soo sheegay inay yihiin kuwo shaki leh.
Waa kan habkayaga KYC:
Waxaad ubaahantahay inaad codsato casuumaada KYC ee kooxdaada adigoo u diraya emayl [emailka waa la ilaaliyay].
Haddii xubintaada muhiimka ah ay dhab ahaantii dhaaftay KYC waxaad u baahan tahay inaad na soo wargeliso - haddii xubnahan shaqaaluhu ku habboon yihiin ICO KYC waxaan hubaal ku dhejin doonnaa diiwaanka KYC.
Xaqiiqdi waxaanu dooran doonaa sidoo kalena aanu soo dhawaynaynaa ugu yaraan 2 xubnood oo ka tirsan maamulka ICO si ay noogu gudbaan nidaamka KYC. Haddii ay jiraan nooc ka mid ah warbixinnada khuseeya ICO ama ka-qaybgaleyaal gaar ah, waxaanu waydiisan doonaa in lagu daro xubnaha si ay uga gudbaan KYC sidoo kale.
Waxaan sidoo kale siin doonnaa foomamka KYC. Nidaamka 'KYC' waxaa hubaal ah in lagu fulin doono iyadoo lala kaashanayo shirkadda aan iskaashiga leenahay ee KYC.
Mid kasta oo ka mid ah kaqeybgalayaasha la martiqaaday waxaa hubaal ah in laga codsan doono inay soo bandhigaan:
Cadaynta aqoonsiga: Baasaboor, kaarka aqoonsiga ama ruqsadda wadista oo aan dhammaan
Selfie oo wata Cadayn Aqoonsi: Sawir nadiif ah oo asal cad ah.
Caddaynta Cinwaanka: Biilasha tas-hiilaadka, Internet/Cable TV/ Kharashka telefoonada, Bayaanada bangiga, cashuur celinta dakhliga, biilasha cashuurta golaha, Dawladdu waxay bixisay Shahaadooyinka degenaanshaha, iwm bayaannada siyaasadda hubaal lama ansixin doono. (waa inuu keenaa 3 kasta)
Dhammaan macluumaadka laga helay dhammaan howlaha KYC waxaa hubaal ah in lagu keydin doono xalka qeybta saddexaad.
Natiijooyinka nidaamka KYC ayaa e-mayl laguu soo diri doonaa.
Haddii aad hayso wax su'aalo ah oo la xiriira KYC, fadlan la xiriir [emailka waa la ilaaliyay]
Kala-badhka Bitcoin - Sidee buu u shaqeeyaa wareegga kala badhku maxayse muhiim u tahay?
Sida Loo Aqbalo Bitcoin Bakhaarkayga? Hagaha Lacag-bixinta BTC
Waa maxay iyo sida ay u shaqeyso macdanta Bitcoin. Dhammaan ku saabsan Sida loo Miino Bitcoins?
Bitcoin sharci ma yahay? Cusboonaysiinta 2021 ee Arinta
Waa maxay Bitcoin? Taariikhda, Astaamaha, Faa'iidooyinka, iyo Khasaarooyinka
ATM-yada Bitcoin: Hagaha bilowga ah ee ATM-yada Bitcoin
Waa kuma Satoshi Nakamoto? Abuuraha Bitcoin
Waa maxay Ujeedada Bitcoin: Mala-awaal ama Dollarization?
Bitcoin Forums: Hagaha bilowga ah ee ku saabsan halka laga wada hadlo BTC
Bitcoin waa laga aqbalay halkan: Sidee ganacsiyadu ugu bilaabi karaan Bitcoin?
Maxaa lagu gada Bitcoin?
Sidee loo iibiyaa Bitcoin?
Sida Loo Iibsado Seeraar: Hababka ugu Fiican, Halkee laga Iibsan karaa, Talooyin
Jeebabka Bitcoin: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Waa maxay Bitcoin blockchain? Hagaha Tignoolajiyada Ka Danbaysa BTC
Waa maxay Bitcoin sideese u shaqeysaa?
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrencies': Maxay yihiin iyo Sidee bay Lacagta Dijital ah u shaqeysaa?
Maxay Tahay Cadeynta Danku (PoS)
Ku soo dhowoow wargeyskayaga
Ha Moogaanin Wararka U Danbeeyay!
Wayn! Hubi sanduuqaaga fariinta si aad u xaqiijiso ka qayb qaadashadaada.
E-mailka Taageerada Guud:
Liiska ICO e-mail:
Taageerada Wadahadalka Telegram:
Liistada ICO ee khadka tooska ah waa qiimeyn ICO madaxbannaan iyo madal liis gareyn iyo bulsho xannibaadda leh oo adeegsadayaal sii kordhaya maalin kasta.
Xor ayaad u tahay inaad nala soo xiriirto adoo si toos ah ula hadlaya ama telegram haddii aad rabto inaad liis garayso ICO-gaaga ama aad u baahan tahay Adeegyo Dhiirrigelinta ICO
Copyright © 2022 Liiska ICO ee khadka tooska ah. All Rights Reserved.
Ma u Baahan Tahay Ico Promotion?